Kooxo hubaysan oo Shacab ku laayey Dalka Burkina Faso iyagoo ku Sugnaa suuqa lagu iibiyo Xoolaha | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Kooxo hubaysan oo Shacab ku laayey Dalka Burkina Faso iyagoo ku Sugnaa...
Kooxo hubaysan oo Shacab ku laayey Dalka Burkina Faso iyagoo ku Sugnaa suuqa lagu iibiyo Xoolaha
Ugu yaraan Ilaa 30 qof ayaa lagu dilay Bariga Dalka Burkina Faso weerar hubeysan oo lagu qaaday suuq xoolo ah, sida ay wararku sheegayaan.
Rag hubaysan oo watay mooto ayaa rasaas ku furay suuqa dadku ku badan yahay ee magaalada Kompienga, sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo dadka deegaanka.
Ma cadda cidda ka dambaysay weerarka, laakiin Dowladda Burkina Faso ayaa u muuqata in ay kordheen rabshadaha Kooxaha jihaaddoon ah iyo iskahorimaadkaka Dhaca Dalka Burkina Faso.
Rabshadaha ayaa ku khasbay boqolaal kun inay ka cararaan guryahooda.
Warbaahinta ayaa horey u sheegtay in 20 qof la diley, iyada oo laga soo xiganayo ilo wareedyo sheegaya in tirada dhimashada ay aad uga badan karto. Wakaalada wararka ee AFP ayaa soo xigatay dadka deegaanka in 30 ay Geeriyoodeen.
Jimcihii ugu yaraan 15 qof ayaa la diley markii looga shakisan yahay mintidiin Islaamiyiin ah inay weerareen kolonyo ganacsato ah oo yiil waqooyiga Dalkaasi Burkino Faso, meel u dhow soohdinta ay la wadaagto Dalka Maali.
Dowladda Burkina Faso ayaa ku eedeysay weerarka “argaggixiso”, weedh inta badan loo adeegsado in lagu qeexo ee ah al-Qaacida iyo jihaadiyiinta xiriir la leh Daacish ee Burkina Faso ayaa dagaallamayay sannadihii ugu dambeeyay.
In kasta oo mararka qaar sheegashada dowladda ee guusha laga gaaro xagjiriinta Islaamiga ah, amni darrada ka jirta waqooyiga iyo bariga Burkina Faso ay si aad ah uga sii dartay.
Jihaadiyiinta ayaa inta badan bartilmaameedsada iskuulada, iyaga oo ku khasbay ku dhawaad ​​300,000 oo carruur ah waxbarashadooda.
Previous articleDowladda Finland oo Qaaday Xayiraada Saaran Dalkeeda qeybo ka mid ah
Next articleDHAGAYSO:- Madaxweynaha Maamulka Jubbaland oo digniin kasoo saaray dagaal beeleedyada
Nin Darawal ah oo Dalka Mareykanka lagu qabtay isagoo isku dayaya...
Sadio Mane Oo Ku Guulaystay Abaalmarinta Xiddiga Ugu Fiican Qaarada Africa...